Samachar Batika || News from Nepal » के अनमोल प्रेममा छन !
के अनमोल प्रेममा छन !
उसो त, मिडियामा आज्ञाले अनमोलसँग ‘पारस’ नामक चलचित्रमा काम गर्न लागेको चर्चा पनि चलेको थियो । तर, निर्माता भूवन केसीले ‘पारस’का लागि नायिका छनोट गरिसकेका छन् । ‘पारस’की नायिकाको बारेमा विस्तृत जानकारी हामी केही दिनमै सार्वजनिक गर्नेछौ ।
प्रकाशित मिति २३ चैत्र २०७७, सोमबार ००:३३